मतदाता नामावली (मतदाता परिचय पत्र ) मा कसरी सुचिकृत हुने? - राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल
मतदाता नामावली (मतदाता परिचय पत्र ) मा कसरी सुचिकृत हुने?
मतदाता नामावली (मतदाता परिचय पत्र ) को जानकारी यस सामाग्रीमा पाइन्छ।
मतदान गर्ने उमेर पुगेपछि अर्थात १८ वर्ष पुरा भएपछी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनु पर्छ र नाम दर्ता गराउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नाम दर्ता गर्न सकिन्छ र निर्वाचन कार्यालयले मतादाता परिचय पत्र उपलब्ध गराउछ ।
यो एक राजनीतिक अधिकार हो, निर्वाचन प्रक्रीयामा सहभागी हुन जस्तै, मतदान गर्न, उम्मेदवार बन्न मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुन् आवश्यक छ । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन नागरिकताको प्रतिलिप आवश्यक हुन्छ भने व्यक्तिको फोटो नामावली दर्ता गर्ने ठाँउमा त्यहिको कर्मचारिले लिने गर्दछन् ।